संसद पुनर्स्थापना भयो भने… - Kohalpur Trends
संसद पुनर्स्थापना भयो भने…
संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने नागरिक समाजको मागलाई कसले सम्वोधन गर्ने ? कसरी सम्वोधन गर्ने ? यो राजनीतिक प्रश्न अर्को आम चुनावसम्म जिवितै रहने छ । हुन त आन्दोलनका क्रममा नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले आगामी दिनमा गल्ती नदोहोर्‍याउने मौखिक प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, उनीहरुले यसबारे स्वेतपत्र नै जारी नगर्दासम्म र त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण नगर्दासम्म नयाँ पुस्ताका नागरिकहरुले पत्याइहाल्ने स्थिति छैन । अझ, प्रतिपक्षमा रहेर पनि संवैधानिक परिषदमा भागबण्डा गरेर ओली सरकारको साक्षी बनेको नेपाली कांग्रेसले त आफूलाई सच्याउने प्रतिवद्धतासम्म जनतामा गर्न सकिरहेको छैन । खास गरी शेरबहादुर देउवामाथि अनेकन प्रश्नहरु उब्जिइरहेका छन् ।
तीन– संसद पुनर्स्थापना भयो भने कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला ? यो अर्को अंक गणितीय प्रश्न हो । संसद पुनर्स्थापनापछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले बहुमत गुमाउनेछन् । पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने उनले नैतिकता भए राजीनामा दिनेछन् । राजीनामा दिएनन् भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्नेछ । नेपाली कांग्रेसले सघाएन भने उनले बहुमत पाउने छैनन् र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने छ । कांग्रेसले ओलीलाई सघाउने सम्भावना कम छ ।
यस्तो गणितीय स्थितिमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको मिलिजुली सरकार गठन हुनेछ । यदि कांग्रेसले कसैलाई पनि समर्थन जनाएन र संसदले प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने त्यसपछि बल्ल निर्वाचनमा जाने संवैधानिक ढोका खुल्नेछ । अथवा, एकाध महिना वा वर्षदिनसम्म मिलिजुली सरकार बनिसकेपछि अर्को चुनावमा जाने स्थिति आउन सक्छ । तथापि आगामी बैशाखको चुनाव टर्नेछ र लगभग एक/डेढ वर्षसम्म यही प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्छ ।
पहिलो कुरा त संसद विघटन सदर भए पनि आगामी वैशाखमा चुनाव हुने सम्भावना छैन । स्वयं केपी ओलीकै कारण वैशाखको चुनाव बिथोलिन्छ । किनभने, पार्टीमा बहुमत नहुँदा नहुँदै पनि ओलीले निर्वाचन आयोगमा नाम र चुनाव चिह्न आफूले पाउनुपर्ने जिरह गरिरहेका छन् । आफूले नपाए सूर्य चिह्न र नाम फ्रिज गराउने ओलीको दाउ छ । सरकारमा आफैं बस्ने, आफैंले वैशाखमा चुनाव घोषणा गर्ने अनि निर्वाचन आयोगमा आफैंले यसरी हलो अड्काइरहने हो भने कसरी वैशाखमा चुनाव हुन्छ ? ओलीकै कारण वैशाखको चुनाव टर्ने संकेत देखिएको छ ।
Previous Previous post: धर्मेन्द्रलाई प्रहरीले सर्वोच्चमा उपस्थित गरायो, भोलि बहस हुने
Next Next post: नागरिक आन्दोलनमाथि नै प्रश्न